lundi, 11 avril 2016 08:57
Solonandrasana Mahalafy Olivier : Hanao fahagagana ?
Voatendry ho praiminisitra Atoa Solonandrasana Mahalafy Olivier. Izy no Praiminisitra faha-3 amin’ny fitondran’Atoa Hery Rajaonarimampianina. 48 ora taorian’ny filazana fametraham-pialan’ny governemanta Ravelonarivo Jean ny zoma 8 aprily ary adiny dimy taorian’ny fanoloran’ny delegasiona solombavambahoaka 16 lahy, notarihin’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Rakotomamonjy Jean Max, tamin’ny filohan’ny Repoblika ny lisitra misy ny anaran’ireo ho praminisitra, dia voatendry ny praiminisitra.
vendredi, 08 avril 2016 12:26
Fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny diabeta
Tetsy amin'ny HJRA Ampefiloha no notontosaina, omaly, ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny diabeta. « Fisorohana sy fandaminana ny diabeta, antoky ny fiainana mirindra » no lohateny nosafidina tamin’ity taona ity. Marihina moa fa 4% ny Malagasy dia diabetika ary monina an-tanan-dehibe ny ankamaroany. Ny any ambanivohitra kosa dia tsy mahalala raha tsy efa mihombo ny aretina izay vinavinaina ho aretina fahafito mahafaty eto Madagasikara amin’ny taona 2030 raha ny tombatombana nataon’ny Fikambanana Iraisam-pirenena misahana ny Fahasalamana (OMS).
vendredi, 08 avril 2016 10:27
Delegasiona maraokana : Hanamarika ny fandalovany ao Antsirabe
Hanamarika ny fandalovany ao Antsirabe mandritra ny “Fihaonambe faha-16 ny Frankofonia” ireo Delegasiona Maraokanina raha ny nambaran’ny Ben’ny tananan’Antsirabe, Paul Razanakolona.
Vakinankaratra : Mankalaza ny andron’ny rano sy ny fanadiova ary fidiovana
“Rano ampy sy madio, Zo fototra antoky ny asa sy ny fampandrosoana”, io no lohahevitra nampitondraina ny hetsika natokan’ny Faritra Vakinankaratra sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy ny “Andron’ny Rano sy ny Fanadiovana ary ny Fidiovana” nanomboka ny 07 aprily ka hatramin’ny 9 aprily, manoloana ny lapan’ny tananan’Antsirabe.
jeudi, 07 avril 2016 10:12
Fitsaboana : Maro no tsy mahatakatra ny sarany
Rehefa natao ny fanadihadiana dia dimam-polo isan-jaton’ny mponina eny amin’ny faritra iva no sahirana ara-bola. Tsy tomombana ny fidiram-bola hany ka lasibatra ireo ankizy rehefa sendran'aretina. Matetika tokoa dia ireny zaza sy ankizy amin'ny faritra iva no tratran'ny aretin'andoha sy fahasemporana kanefa tsy ampy hoenti-manana ireo ray aman-dreny hitsaboana ny zaza.
Depioten’i Soanierana Ivongo, Tody Arnaud
lundi, 04 avril 2016 21:17
Sary Sobika Toamaisna
Lozam-pifamoivoizana RN5 : Naratra mafy ny depioten’i Soanierana Ivongo, Tody Arnaud
Tsaboina ao amin’ny hopitaly manarapenitra Morafeno Toamasina ny solombavam-bahoakan’i Soanierana Ivongo, Tody Arnaud, noho ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy. Avy naka andiana skoto zanak’i Soanierana Ivongo nampianatra ireo tantsaha amin’ny fambolena vary 10 andro tao Vohilengo Fenoarivo Atsinanana ny tenany, no izao tra-doza izao.
lundi, 04 avril 2016 11:43
Antsirabe : Haintrano namono zaza iray sy nahamay telo hafa
Nitrangana hain-trano tao amin’ny fokontany Atsimontsena ny alin’ny sabotsy 3 martsa, tokony ho tamin’ny valo alina tany ho any. Trano hazo no nirehitra ary ny loza dia samy tsy tao ny ray aman-drenin’ireo ankizy, rangahy marary any amin'ny hopitaly, ramatoa no nitsabo azy any. Efatra mianadahy ireo zaza tao an-trano ka maty vokatry ny afo ilay zazalahy 2 taona, zandriny indrindra, raha toa ka may kosa ireo mpiray tampo aminy.
lundi, 04 avril 2016 10:34
Antsahalalina – Ambohimalaza (SAVA) : Pastera nahatrarana lavanila maitso
Pastera amina Fiangonana zandriny iray no nosamborin’ny andrimasopokonolona ao Antsahalalina, Kaominina ambanivohitra Ambohimalaza Distrikan’i Sambava omaly, rehefa nahatratrarana lavanila maitso. Andian’ankizy no nahita lavanila maitso niparitaka teo akaikin’ny tranon’i Pastera. Namepetra azy ireo ity farany mba tsy hiteniteny amin'olona. Tsy nahafehy teny anefa ireo ankizy ka niparitaka ny feo, ka nandehanan'ny andrimasopokonolona nohamarinina na misy na tsia izany.
samedi, 02 avril 2016 21:45
Farafangana : Fanamarihana ny 2 aprily, Andron'ny zandary
Natomboka tamin'ny fananganan-tsaina ny maraina tao amin'ny caserne Mahafasa Andrefana ao Farafangana, avy eo niroso tamin'ny hazakazaky ny firaisankina nandraisan'ireo mpitandro filaminana rehetra sy sivily anjara tao Farafangana. Nisy ihany koa ny lalao baolina kitra ho an'olona 7 tao amin'ny kianjan'i Don Bosco, izay nihaonan'ny Mpitandro ny filaminana (Zandary, polisy, miaramila, mpiandry fonja) sy ny sivily ka resy tamin'ny isa 5 no 4 ry zareo mpitazona basy.
Seranampiaramandina Antsirabato - Antalaha
samedi, 02 avril 2016 09:05
Seranampiaramanidina Antsirabato - Antalaha : Iharan'ny fandrahonan'ny mponina manodidina ireo mpiasa
Mba hisian'ny fiarovana ny seranampiaramanidina sy ny sidina rehetra ao Antsirabato Antalaha dia namafisina ny lalàna izay efa misy ka raràna ny manao hitsindalana amin'ny piste. Torak'izany koa ny manao kijana ny seranampiaramanidina，sy ny maka terre jaune sy bozaka manodidina. Misokatra ho an'ny olona rehetra ny seranampiaramanidina manomboka amin'ny 6 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora sy sasany hariva.